जसले नेपालमा चिनियाँ चिया रोपे : RajdhaniDaily.com -
Home प्रमुख जसले नेपालमा चिनियाँ चिया रोपे
तपाईं चियाको सुर्की लिँदै हुनृुहुन्छ ? चिनी हालेको वा नहालेकै किन नहोस्, चिया पारखी त पक्कै हुनुपर्छ । थाहा छ ? नेपालमा चिया भित्र्ययाउने ‘प्रथम व्यक्ति को हुन् ?
घोरिँदै हुनुहुन्छ ?
त्यसो हो भने सोच्न छोड्नुस् ।
अब फर्कौं, विसं १९२० तिर । नेपालका प्रधानमन्त्री थिए, जंगबहादुर राणा । उनैका ज्वाइँ थिए, नेपालमा चिया रोप्ने प्रथम व्यक्ति ।
तत्कालीन चिनियाँ सम्राटले जंगबहादुरलाई चिनियाँ चिया बीउ उपहार दिएका रहेछन् । बीउ हात के परेको थियो, जंग आदेश जारी भयो, ‘लौ, अब चियाखेती सुरु गर ।’
आदेशअनुसार इलामका तत्कालीन बडाहाकिम तथा जंगबहादुरका जेठा ज्वाइँ गजराज सिंह थापा अघिल्लो पंक्तिमा देखापरे । उनैबाट विसं १९२० मै इलाम चिया कमानमा खेती सुरु भयो ।
दुई वर्षपछि झापा फाँटमा सोक्तिम चिया कमान नै स्थापना गरियो । यहीबाट नेपालमा चिया खेती थालनी भएको इतिहास बताउँछ ।
उता, दार्जिलिङमा संगसंगै चिया खेती सुरु हुन थाल्यो । नेपालमा भने जंगेका ज्वाइँ गजराज चिया खेतीका अग्रणी मानिन्छन् । उनको चिया बिजारोपणपछि यसले राष्ट्रिय आयमा समेत ठुलो योगदान पुगेको बताइन्छ ।
संगैजस्तो चियाखेती थालेको दार्जिलिङले उद्योग विस्तारसंगै आफ्नो उत्पादन विश्वस्तरमै पु-याउन थाल्यो । नेपाल ठीक उल्टो दिशातिर जान थाल्यो । जहाँनिया राणाशासनकै कारण चिया उद्योगको प्रारम्भिक चरण सन्तोषजनक रहन सकेन ।
विसं २००७ मा प्रजातन्त्रका लागि भीषण आन्दोलन छेडियो । राजनीतिक उथलपुथल सुरु भयो । देश मुहार फेर्ने दौडमा लम्कनेक्रममा थियो ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मात्रै नेपालमा लगानीमय वातावरण बन्न थालेको भुक्तभोगी सम्झना गर्छन् । सकारात्मक प्रभाव चिया उत्पादनमा पनि नपर्ने कुरै भएन । विस्तारै लगानीमय वातावरण बन्न थाल्यो ।
झापा रड्गिया डाँडामा बुधकरण चिया बगान निजीस्तरमै पहिलो हो । जुन २०१६ सालमा स्थापना भएको थियो ।
२३ असोज २०२३ मा नेपाल चिया विकास निगम जन्मियो । यो कम्पनी सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा थियो ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रशोधन कारखाना अभाव थियो । जसका कारण दार्जिलिङका कारखानालाई ‘हरियो पत्ती’ बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।
पछि, २०३५ सालमा इलाममा मुलुककै पहिलो प्रशोधन केन्द्र खोलियो । लगत्तै झापा सोक्तिममा पनि प्रशोधन कारखाना स्थापना स्थापना स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी सफल भए ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट पूर्वाञ्चलका पाँच जिल्ला झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम ‘चियाक्षेत्र’ घोषणा गरियो । राज्यको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत चियाखेती परिणामुखी देखिएपछि राजाबाटै २०३९ सालमा तोकेरै क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
२० जेठ २०५० मा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९ मार्फत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन गरियो । १५ वैशाखमा ‘चिया दिवस’ र १ मंसिरमा ‘कफी दिवस’ मनाइने परम्परा नै थालनी गरियो ।
त्यसो त, २०३५ देखि २०४५ को दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना कृषकलाई खेतीमा लाग्न प्रत्साहनलगायत योजना ल्याएको पाइन्छ । अहिले चिया उद्योगले नाफामूलक व्यवसायको रूप लिएको अवस्था छ ।
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवादले नेताका दौडधुप तीव्र बनेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ...
लन्डन । बेलायतमा कोरोनाका कारण थप ३ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । सङ्क्रमण देखिएपछि दुई हप्ताअघि लण्डनको रोयल फ्री अस्पतालमा भर्ना भएका ७२...
‘कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्का भए ११८० मा खबर गर्नुहोस्’
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या शुन्दर शाक्यले कसैलाई कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्का भएमा टोल फ्रि नं ११८० मा खबर गर्न अनुरोध गरेका छन्...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 30, 2020 0
मेलम्चीको सुरुङ फुट्दा बेपत्ता भएका इञ्जिनीयरको शव फेला
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - July 15, 2020 0
मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकोे सुरुङ परीक्षणका क्रममा बेपत्ता भएका दुई मध्ये एक जनाको शव भेटिएको छ । परीक्षणका क्रममा सुरुङको १७ नं गेट फुट्दा...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - July 23, 2020 0
मिलान । भेट्रान स्विडिस फरवार्ड ज्लाटन इभ्राहिमोभिचको दुई गोल सहयोगमा एसी मिलानले सस्सुलोमाथि झिनो जित निकालेको छ । मिलानले घरेलु टोलीमाथि २–१ को जित...
कतारको श्रम स्वीकृति बन्द
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - March 11, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस प्रभावकै कारण सरकारले कतार जाने कामदारका लागि दिँदै आएको श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । कतार सरकारले नेपालसहित विभिन्न १४...
ओलम्पिक सार्न माग
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - March 23, 2020 0
ओस्लो । आउदो जुलाई र अगस्टमा एसियाली मुलुक जापानमा विश्व खेलकुदको कुम्भमेला टोकियो ओलम्पिक–२०२० हुने तय छ । ओलम्पिक हुन चार महिना बाँकी छ...
समाज राजधानी समाचारदाता - November 23, 2020 0
सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन शीघ्र हुने : प्रधानमन्त्री
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - February 8, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १९औं शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्न सदस्य राष्ट्रबीच सहमति हुनेमा...
सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी तयारी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारी थालेको छ । सरकारका गतिविधिहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्न थालेपछि प्रतिपक्षमा प्रमुख...
धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसनमै जन्मियो छोरा
प्रदेश ४ राजधानी समाचारदाता - June 25, 2020 0
बागलुङ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पछि धौलागिरी अस्पताल बागलुङको आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत एक महिलाले छोरा जन्माएकी छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–८ की १९ वर्षीय...
निराजन पौडेल - May 8, 2021